Misoro yaNhau, China 11 Ndira, 2018
Vemapato anopikisa vanoti havasi kufara nekusapiwa mukana neZEC kuti vapewo pfungwa dzavo mukusharwa kwenzvimbo dzekunyoresera kuvhota muchirongwa chekunyoresa kuvhota chakawedzerwa nguva, vachiti ZEC yakasiya dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakaita semumigodhi nemumapurazi.
Mubatanidzwa wemachechi we Divine Destiny Network unoti hurumende yaVaMnangagwa ichiri kutatarika kutevera bumbiro remitemo, uye uri kukumbira hurumende kuti isiyane nemaitiro evaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
Vagari vekuminda yemangoda ekwaChiadzwa mudunhu reManicaland vanoti kubva pakawanikwa mangoda mudunhu ravo havasati vawana zvakare rugare, kungave kuburikidza nekuwaniswa mabasa, rununguko kana kuwana cheuviri.
Munhau dzemitambo, aive murairidzi wechikwata chenhabvu cheDynamos uye maWarriors, Kalisto Pasuwa, anovamba chirongwa chitsva chekubatsira vatambi vasina zvikwata zvekutambira kuti vawane mabasa.
Muchirongwa cheLiveTalk Women’s RoundTable na 8pm, tiri kutarisa nyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva roga-roga, uye kuti zvinobata sei madzimai.
Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6:00am, Muvhuro kusvika chishanu.
Misoro yeNhau, China, Ndira 11, 2018